Raga iyo dumarka oo ku gala gedisan fikirka galmada xalaasha ah””DAAWO | Gaaloos.com
Home » galmada » Raga iyo dumarka oo ku gala gedisan fikirka galmada xalaasha ah””DAAWO
Raga iyo dumarka oo ku gala gedisan fikirka galmada xalaasha ah””DAAWO
Baaritaan ay sameeyeen khuburo maraykan ah oo ka hawlgasha Seductionslabs ( laabka soojiidashada) ayaa waxa ay soo saareen natiijada daraasad ay ku sameeyeen sida ragu ugu fikiro galmda.
Daraasada ayaa waxa ay tilmaamaysaa in fikirka raga ee ku saabsan galmada uu ka duwan yahay ta dumarka. Fikirka raga ayaa waxa uu ku salaysan yahay awood iyo kala sarayn halka dumrakuna kaga fikirayaan in ay sameeyaan wax aan la caadi ahayn.
Hadaba halkan hoose ayaa waxa tvsoomaali ay soo galinaysa dhowr ka mid ah fikirka reeban ee raga firkirkooda galmada:
-Dumar badan: In uu laba xaas lahaado oo ay hal guri la degan yihiin, walibana ay mid seddexaad ugu jirto safka.
8 Qalad Oo Ay Raggu Sameeyaan Xiliga Kulanka Sariirta Oo Dumarka Raaxada Kukala Gooya, Halkaan ka akhriso
-Galmo joogta ah: In uu helo galmo joogta ah mar kasta iyo meel kasta oo uu joogo oo uu dareenkiisu kaco.
-In ay matasho xaaskiisu naag kale:Raga xaaska leh oo ilaalinaya jiritaanka qoyska ayaa waxa ay ku fikiraan in ay xaaskiisu iska dhigto naag kale oo aanu aqoon. Taas oo uu ragu ka helo dareen badan hadii ay xaaskiisu sidaas samayso.
-In ay la raaxaystaan naag ayna aqoon: Sida aan kor ku sheegnay in ay ku fikiraan in xaaskoodu matasho qof aanay hore u araga ayaa waxa ay ku tusaysaa in ay galmo la samyn lahaayeen naag kale oo ayna aqoon. Laakiin uu damiirku u ogolayn.
-Wax ay ku fikiraan waxa aad u mamnuuca ah: Waxa kale oo ay ku fikiraan in ay xiriir la sameeyaan xaaskooda saaxiibadeed ama ay aad ugu fikiraan haweenayda ka ah maamule shaqada ay ka shaqeeyaan.
Waxa kale oo ay ku fikiraan gabadh ka yar xooskooda ama ayaga oo leh harem ( oo ah dumra badan) oo ay qabaan. Waxa kale oo ka mid ah uguna damaysa arimahan kuwa ku fikira in ay is garaacaan. Taas oo afka qalaad lagu dhaho “sadomachocism
Title: Raga iyo dumarka oo ku gala gedisan fikirka galmada xalaasha ah””DAAWO